Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi yeBetta-BikeHike
Ikhaya » Zomxube » Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi yeBetta
Ngawaphi amanzi owasebenzisayo kwi-betta fish?
Ngaba Kulungile ukusebenzisa amanzi adibeneyo kwitanki yentlanzi?
Uyenza njani i-betta fish yamanzi?
Ndingasebenzisa amanzi asebhotileni kwi-betta yam?
Ngaba i-7.6 pH ikhuselekile kwi-Bettas?
Loluphi uhlobo lwamanzi ekufuneka uwasebenzise kwitanki yeentlanzi?
Ngaba iiBettas ziyawathanda amanzi aqinileyo?
Kufuneka utshintshe kangaphi amanzi eBetta?
Ngaba iiBettas ziyawathanda amanzi amnyama?
Uwenza njani amanzi etephu ukuba akhuseleke kwiintlanzi?
Ngaba ungabeka intlanzi ye-betta emanzini epompo ngaphandle kwe-conditioner?
Ngaba i-bettas idinga ityuwa emanzini abo?
Ngaba iiBetta ziyasidinga isihluzi?
Ndiyithoba njani i-pH kwintlanzi yam ye-betta?
Yeyiphi i-pH ekhethwa yi-bettas?
Akufunekanga usebenzise amanzi adityanisiweyo kutshintsho lwamanzi kwitanki yakho yeentlanzi. Isizathu saloo nto kukunqongophala kwezimbiwa kwamanzi adiyiliweyo. Iintlanzi kunye nezityalo ngokufanayo zisebenzisa iiminerali emanzini, apho abantu banokufumana konke abakufunayo ekutyeni. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa iiminerali ziya kulawula kwaye ZIZINZISE amanqanaba e-pH emanzini.
Inyathelo loku-1: Qala nge-1 engenanto yeGaloni yesikhongozeli samanzi okusela. Inyathelo lesi-1: Yongeza i-2 Drops yeNovAqua Plus ngeGaloni nganye yamanzi. Inyathelo lesi-2: Yongeza i-3/1 ye-Tea Spoon ye-Aquarium yeTyuwa yeTyuwa ngeGaloni nganye yamanzi. Inyathelo lesi-2: Yongeza i-4 Drop ye-Aquari-Sol ngeGaloni nganye yamanzi. Inyathelo lesi-1: Gcwalisa iNtsalela yesingxobo ngamanzi etephu. Inyathelo lesi-5: Ityala elongezelelweyo:.
Amanzi omthombo wamanzi asebhotileni yindlela ebiza kakhulu kumanzi ompompo, kodwa ngokungafaniyo namanzi adibeneyo, ayikacutshungulwa ukususa iiminerali kunye nezondlo. La manzi akayi kuba neklorini kuwo, nokuba, ngoko kukhuselekile ukusebenzisa kwiitanki ze-betta ukuba nje amanqanaba e-pH awela ngokuhambelana namanqanaba e-betta akhuselekileyo.
Intlanzi ye-Betta yenza kakuhle nge-pH engathathi hlangothi ye-7.0 kodwa inokunyamezela uluhlu oluphakathi kwe-6.5-7.0.
Amanzi ompompo aqhelekileyo alungile ngokuzalisa i-aquarium logama nje uyivumela ukuba ihlale iintsuku ezininzi phambi kokuba wongeze intlanzi (iklorine emanzini etephini iya kubulala intlanzi). Unokuthenga kwakhona izisombululo ze-dechlorination kwivenkile yethu.
Ukuba usokola nokugcina la manqanaba kwitanki yakho ngenxa yomthombo wamanzi osetyenziswayo, kunokuba ngcono ukutshintshela kumanzi adityanisiweyo okanye ukubuyisela umva amanzi e-osmosis ukuze ube nolawulo olungaphezulu kwezi ziguquguqukayo.
Kodwa inguqulo emfutshane kukuba utshintsho lwamanzi oluncinci lwe-10-20% kanye ngeentsuku ezi-7-10 lungcono kwimpilo yakho ye-betta. Oku kukwacinga ukuba usebenzisa isihluzo. Unokwenza utshintsho lwamanzi nge-20-30% kanye rhoqo kwiiveki ezi-2-3, kodwa utshintsho oluncinci lwamanzi lungcono kwiimeko ezizinzileyo zamanzi! Epreli 18, 2021.
Intlanzi yeNdalo yaseBetta ihlala kumanzi ahamba kancinci afana nemigxobhozo, imilanjana emincinci okanye amasimi erayisi. IiBetta zihlala kwindawo ebizwa ngokuba ziindawo zamanzi amnyama apho amanzi anombala omdaka omnyama. I-tannins idayi amanzi amdaka omnyama, njengaxa ufaka amanzi ashushu kwibhegi yeti.
Amanzi etephu. Amanzi asetyenziswa ngabagcini beentlanzi abaninzi aphuma kanye kumpompo wakho! Nangona kunjalo, akufuneki usebenzise amanzi etephu kwitanki yakho yentlanzi ngaphandle kokulungelelanisa amanzi kuqala.
Logama nje ungasebenzisi kakhulu itanki yakho, ke ityuwa ye-aquarium ikhuselekile ngokugqibeleleyo kwiibettas. Ngelixa abanye abantu basebenzisa ityuwa ye-aquarium ukunyanga izifo ezibuthathaka, abanye abantu bayongeza kwitanki yabo njengothintelo jikelele. Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba i-bettas ayifuni ityuwa ye-aquarium.
Ngaba intlanzi yeBetta idinga isihluzo? Ukungasisebenzisi isihluzi kufuna ukuzibophelela kunye nomsebenzi omninzi. Ukusebenzisa isihluzi kungcono kakhulu kwiBetta yakho. Ukuba ukhetha ukungasisebenzisi isihluzo xa ugcina iBetta kukuzibophelela okukhulu njengoko kuya kufuneka wenze utshintsho olukhulu lwamanzi ngeveki ukuze amanzi angabi yityhefu.
Uyithoba njani i-pH kwiiaquariums: Sebenzisa i-osmosis eguqukayo (RO) okanye i-deionized (DI) amanzi ukwenza i-pH efunekayo kwaye unikeze isithinteli. Soloko ulungisa amanzi kwaye uvavanye i-pH ngaphambi kokuyongeza kwi-aquarium yakho. Hombisa i-aquarium yakho nge-driftwood yendalo. Yongeza i-peat moss okanye i-peat pellets kwisihluzo sakho.
I-pH kufuneka igcinwe phakathi kwe-6.5 kunye ne-8. Amanzi kufuneka atshintshwe rhoqo, ubuncinane kanye ngeveki, ukuqinisekisa ukuba intlanzi inamanzi ahlaziyekileyo. Bona indlela yokondla intlanzi yakho ye-betta apha.
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba iintlanzi zeBetta ziyakwazi ukusinda kumanzi adityanisiweyo
Ngaba Unokusebenzisa Amanzi Adityanisiweyo Kwintlanzi yeBetta
Ndingasebenzisa Amanzi adityanisiweyo kwiintlanzi zeBetta
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba uyawasebenzisa amanzi adityanisiweyo kwiintlanzi zeBetta
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba unokuSebenzisa Amanzi aneDistilled kwiintlanzi zeBetta
Ndingayifaka Intlanzi yam yeBetta kumanzi adityanisiweyo
Ngaba unokusebenzisa Amanzi adityanisiweyo kwiTanki yeentlanzi zeBetta
Ndingasebenzisa Amanzi Adityanisiweyo Kwintlanzi yeBetta
Umbuzo: Ndingasebenzisa Amanzi Adiyiweyo Kwintlanzi yam yeBetta
Impendulo eKhawulezayo: Yimalini i-Ph ekufuneka ibeseManzini kwiNtlanzi yeBetta